Iindaba -Iimpawu kunye neThemba lokuQinisekiswa kweeNxalenye zoMatshini
Umzi mveliso wokuchaneka ngokuchanekileyo ubusoloko uyimbambano yabasebenzi, eyinkunzi enkulu, kunye netekhnoloji enomdla kakhulu. Icandelo linomda ophezulu. Nokuba ishishini ngokubanzi alifikeleli kwinqanaba elithile, kuya kuba nzima ukuvelisa inzuzo. Amashishini amakhulu anokunciphisa iindleko ngokuthenga kunye nemveliso enkulu, ulungelelwaniso lweshishini, kunye nokwakha intengiso yentengiso yengingqi egubungela iimveliso ezivela kwimimandla eyahlukeneyo nakwimizi-mveliso. Ke ngoko, ishishini machining ngqo unalo uphawu Hengqiang noko noko. Kwixesha elizayo, eli shishini liza kugxila ikakhulu kumdibaniso, ukuhlanganiswa kwengingqi, ukudityaniswa kwemixokelelwane yezoshishino kunye nokudityaniswa kweqhinga.
Phakathi kwabo, ukudityaniswa kwengingqi kukudityaniswa kwamashishini okulungisa ngokuchanekileyo kwingingqi enye, ke oko kungagxila ekusetyenzisweni komgaqo-nkqubo kunye neenzuzo zolawulo, kwaye kuvelise intsebenziswano elungileyo kunye nokusebenzisana. Umdibaniso wokudityaniswa kwamashishini ngumsebenzi omnye odityaniswe ngumzi mveliso weemishini, okanye iinkampani ezenza ezantsi zinokusebenza kunye nabanikezeli becandelo eliphambili ukusombulula imiqobo yezobuchwephesha ejongene nezinto ezinobunzima; Umdibaniso weqhinga kukungeniswa kwamaqabane acwangcisiweyo anje ngeemoto kunye nomkhosi ukuze kuqondwe iimfuno ezisezantsi ngokuchanekileyo, ukuphuhlisa iimveliso ekujoliswe kuzo, kunye nokunciphisa ilahleko engeyomfuneko ngexesha lophando kunye nophuhliso.
Inkqubo yokulungiswa kwamalungu ngokuchanekileyo ineemfuno ezingqongqo kakhulu. Ukungakhathali okuncinci ngexesha lokuqhubekeka kuya kubangela ukuba impazamo yomsebenzi igqithe kuluhlu lokunyamezelana, kwaye kuyakufuneka ukuba uphinde uphinde ubhengeze ukungabinanto, nto leyo eyonyusa kakhulu indleko zemveliso. Ke ngoko, namhlanje sithetha ngeemfuno zokulungiswa kwezahlulo ezichanekileyo, ezinokusinceda siphucule ukusebenza kwemveliso. Eyokuqala ziimfuno zobungakanani. Qiniseka ukuba uyilandela ngokungqongqo le fom kunye neemfuno zokunyamezelana kwindawo yomzobo. Nangona izinto ezigqityiweyo zaze zaveliswa lishishini azizukufana ncam nobukhulu bomzobo, eyona milinganiselo iphakathi kuluhlu lokunyamezelana kwemilinganiselo yethiyori, ezo zonke iimveliso ezifanelekileyo nezinokusetyenziswa.
Okwesibini, ngokwezixhobo, ukurhabaxa kunye nokugqitywa kufuneka kwenziwe kusetyenziswa izixhobo ezinentsebenzo eyahlukileyo. Ngenxa yokuba inkqubo yokurhabaxa isika iindawo ezininzi ezingenanto, indawo yokusebenza iya kuvelisa isixa esikhulu soxinzelelo lwangaphakathi xa ukutya kukhulu kwaye ubunzulu bokusika bukhulu. Ngeli xesha, ukugqiba akunakwenziwa. Xa umsebenzi ugqityiwe ngexesha elithile, kuya kufuneka usebenze kumatshini wokuchaneka okuphezulu ukuze umsebenzi ubenokufezekisa ukuchaneka okuphezulu.
Ukulungiswa kwamalungu ngokuchanekileyo kuhlala kubandakanya unyango lomphezulu kunye nonyango lobushushu. Unyango umphezulu kufuneka ibekwe emva machining ngqo. Kwaye kwinkqubo yokuchaneka ngokuchanekileyo, ubukhulu bomaleko obhityileyo emva konyango lomphezulu kufuneka luqwalaselwe. Unyango lobushushu kukuphucula ukusika ukusebenza kwesinyithi, ngenxa yoko kufuneka yenziwe ngaphambi kokuba kwenziwe. Oku kulapha ngasentla ziimfuno ekufuneka zilandelwe xa kusenziwa iindawo ezichanekileyo.
Ixesha Post: Meyi-27-2020